24 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ 24 2013
တချို့ကသိမျးယူခံရဖို့အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းများအတွက်တူရကီ-Izmir-Manisa Menemen ဘူတာအကြားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တချို့ကအမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းဘူတာသိမျးပါလိမ့်မည်တူရကီ-Izmir-Manisa Menemen အကြားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါတရားဝင်ပြန်တမ်းထဲမှာထုတ်ဝေဝန်ကြီးအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရ, 2013 တစ်နှစ်တာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင် [ပို ... ]
RayHaber 24.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ဒေါင်လိုက်မသန်စွမ်းပလက်ဖောင်းမပြတ်မတောက် power supply နှင့်အတူ Voice ကိုအသံဖမ်းဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (တည်းခိုခန်းနှင့်ဒေသခံအဆောက်အဦး jack ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် Malatya အတွက်) တညျဆောကျပါလိမ့်မည်အမြင်အာရုံဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှု EMU ရထားအစုံပါလိမ့်မည် (TÜVASAŞ) Related ရထားသတင်းနှင့်ရန်စိတ်ဝင်စား [ပို ... ]
တူရကီ Kurtulus Metro အတွက်ကျနော်တို့မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်နမ်းနေကယျတငျတျောမူခွငျးကိုရပ်တန့်ကြေညာချက် '' မြေအောက်ရထားနမ်းအရေးယူ '' စုစည်းဖို့ဖြစ်တယ်အောင်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြလိုသူဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် "ချစ်ခင်ရပါသောခရီးသည်, ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကျေးဇူးပြုပြီး" ။ အစောပိုင်းကအဆိုပါလွတ်မြောက်ရေးမက်ထရိုရပ်တန့်စောင့်ဆိုင်းတစ်ပတ်အတွက် [ပို ... ]
နှစ်ခုကုမ္ပဏီကြီးထက် TCDD xnumx't နူးညံ့သောအနေဖြင့်
အဆိုပါ xnumx't နှစ်ခုထက် TCDD တင်ဒါနှင့်ဆက်စပ်သောအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု Konya Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားဘူတာနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ဂျုံစျေးကွက်၏သမ္မတ၏ဧရာမအထွေထွေညွှန်ကြားမှုပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးအိမ်ခြံမြေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှသိမ်းဆည်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ TCDD, Konya [ပို ... ]
xnumx'üncတံတား Emre မြေဆီလွှာကို3များအတွက်ပါလီမန်မေးခွန်းတွေ CHP လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ။ သူကတံတားမှမေးခွန်းတစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim သည့် prompt ကို resolution နဲ့ပါလီမန်၏ဥက္ကဋ္ဌတို့ကရေးသားဖြေကြားခြင်းကို: [ပို ... ]
TCDD အရေးပေါ် expropriation စေမည်
TCDD အချို့ယိမျးမယို, တူရကီအပေါ်အချင်းချင်း Menemen-Manisa ဘူတာ Scope ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်း muhdesat သုံးခုလိုင်းများစေနိုင်ရန်အတွက်အရေးပေါ် expropriation နယူးမီးရထားနဲ့ဒုတိယလိုင်းဆောက်လုပ်ရေး, အခြေခံအဆောက်အအုံပြန်လည်ထူထောင်ရေး, လြှပျစစျမီး, အချက်ပြခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအဆောက်အစေမည် [ပို ... ]
မီးရထားအီးယူမီးရထားစည်းမျဉ်းမှ General Manager Erol Çıtak, ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကနေပံ့ပိုးကူညီသူတို့ကဥပဒေပြဌာန်းထားခံရရန်အစီအစဉ်များအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ခဲ့သည်, ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုအတွက်ရထားလမ်းကို run ထားရမည်, ဒီပြဿနာအပေါ်အီးယူကျွမ်းကျင်သူများထံမှ၎င်း၏ရရန်နည်းပညာအတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများကိုကဆိုသည်။ Çıtak [ပို ... ]
မီးရထားပဏာမစီမံကိန်းကိုGÜMÜŞHANEလက်ထောက် Assoc ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Kemallettin Aydin Erzincan - Gumushane စီမံကိန်းအခြေစိုက်အမဲလိုက်မီးရထားပြီးစီးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မကြာမီတင်ဒါပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်တင်ဒါ။ Aydin "ဟု The စီမံကိန်းကို 2023 ရူပါရုံကိုခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ နှင့်တရားမျှတမှု [ပို ... ]
အစ္စလာမ့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်, အတာ့ခ်မင်နစ္စတန်-အာဖဂန်နစ္စတန်-Tajikistan မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းများ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များပေးပါလိမ့်မယ်။ Tajikistan ရဲ့မြို့တော်ဒူရှန်းဘီရှိသူ၏ကြေညာချက်တွင်အစ္စလာမ့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကသမ္မတအာမက်မိုဟာမက်အလီ, သူတို့ကဆိုပါတယ်စီမံကိန်းကိုပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဟုဆိုသည်။ အစ္စလာမ့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ကဖွဲ့စည်းဒူရှန်းဘီလီအတွက်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဘယ်သူသည် [ပို ... ]
Lodos အဆိုပါခရီးသည်ရထား (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ကိုလျှပ်စစ်ကေဘယ်လ်ကြိုးပြတ်
အဆိုပါခရီးသည်ရထားများ၏လှုပ်ရှားမှုကို Maltepe lodos မှာဒီလိုမြင်ကွင်းခွင့်ပြုလျှပ်စစ်လိုင်းအတွက်ဝါယာကြိုးများသည့်ခရီးသည်ရထား၏လျှပ်စစ်ကြိုးတွေကျိုးခဲ့ပြတ်။ ရထားများ၏စက်ပြင်အစိတ်အပိုင်းအတွက် cable ကိုခြိုးဖောကျဖန်တစ်နေရာရာမှာထွက်ဆွဲထားရထားရပ်တန့်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ ပင်ကြိုးတွေခိုင်ခံ့သောအနောက်တောင်လေအဆက်ပြတ်နေကြတယ် [ပို ... ]
controllers YHT (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်
အဆိုပါ 2013 ခုနှစ်တွင်သူပေးထားခဲ့သည် YHT Controller မှစစ်ဆင်ရေးသင်တန်းဖွင့်ပွဲ Marmaray စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများများအတွက် Eskisehir YHT-Gebze traffic control နှင့် 25 26 အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ YHT-Term ယာဉ်အသွားအလာပညာရေး,9နှင့် 10 ။ YHT-Term ယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှု [ပို ... ]
Diyarbakir Start ကိုရထားစနစ်သည်အလုပ်လုပ်မှ
Diyarbakir ရထားစနစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ Start မှ: အစတုရန်းဖရဲသီးမှာတည်ရှိပါတယ်Kayapınarအတွက် Diyarbakir ၏ Kantar Interchange ခရိုင်ရထားစနစ်နှင့် Interchange ကြောင့်ဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Diyarbakir အတွက်Kayapınarဖရဲသီးခရိုင်ကြေးခွံလမ်းဆုံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် Interchange အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် [ပို ... ]
ကုန်စည်ပြပွဲ xnumx'y အစာရှောင်ရထား (ဗီဒီယို) သတို့သမီးကမ်ပိန်းယူ
ကုန်စည်ပြပွဲ xnumx'y အစာရှောင်ရထားသတို့သမီးရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် 2016 သန်းလက်မှတ်များစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး Continues ၏တိုးတက်မှု ANTALYA başlatığı FOR ACCI ရထားကြာပါသည်။ ရုံကိုမြင်လျှင် "သင်ဘာမှအားလုံးကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲမပွုနိုငျ Osman Çetin Budak ACCI သမ္မတခံစားနေရပြီးပြီးနောက် ANTALYA IN ဒီကင်ပိန်း [ပို ... ]
တူရကီ၏အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဆိုက်ပရပ်စ် Semih ဆိုက်ပရပ်စ်ကနေမြန်နှုန်းမြင့်ရထားဝေဖန်မှုများကိုတုံ့ပြန်ရန် duzceli, အော်တိုမန်မြို့တော်အစ္စတန်ဘူလ်တူရကီမြန်နှုန်းမီးရထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဖန်မှုကိုတုံ့ပြန်ရန်နှင့်အတူသမ္မတနိုင်ငံမြို့တော်Düzceမြန်နှုန်းရထားဘူတာရုံ၏လုပ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်လို့မရဘူး "ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ အချည်းနှီးသော, [ပို ... ]
Malatya TRAMBUS နူးညံ့အတည်ပြုခဲ့သည်
အတွင်းမြို့၏ Malatya မြူနီစီပယ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း (Trambus) အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကအားဖြင့်အသွားအလာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည် "အဟောင်းနှင့်စျေးကြီး" တချို့နိုင်ငံရေးသမားတွေဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများက၏ဖော်ပြချက်နုကော်မရှင်ကအတည်ပြုခံရဖို့သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်အဖြစ်နေသော်လည်း။ 22 [ပို ... ]
စူလတန် II ကို။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Hejaz မီးရထား၏ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့လေ့လာမှုများပေးထားခံရဖို့ Abdulhamid ''
စူလတန် II ကို။ အဗ္ဗဒူဟာမစ်ကသူ့အလုပ် Hejaz မီးရထားKarabükတက္ကသိုလ် (KBU) ကအော်တိုမန်စူလတန် II ၏ရထားစနစ်များအင်ဂျင်နီယာပုဒ်မများအတွက်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ပေးအပ်ခြင်းခံရရန်။ အဗ္ဗဒူဟာမစ် Hejaz မီးရထားကြောင့်အလုပ်ကဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ဒီဂရီခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ ဘပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Bektas Açıkgöz [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြင့်ခရီးသွားလာခရီးသည်များ၏ -4 Levent ယုံကြည်စိတ်ချရသော Ayazaga, ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မည်သည့် Metro Yenikapi Yenikapi -Taksim -Şişlနှင့်အတူပေါင်းစပ်သေချာ - Marmaray စီမံကိန်းအတွက်အဘယ်အရာကိုသာယာအဆင်ပြေမှုများပေးလိမ့်မယ်။ - Kadikoy-Kartal အကြားတည်ဆောက်ထား [ပို ... ]
လက်ဖက်ရာသီနှင့်အတူ Rized ကွှကေဘယ်လ်ကားမတော်တဆမှု
လက်ဖက်ရည် cable ကိုကားတစ်စီးကေဘယ်လ်ကားမတော်တဆမှုမတော်တဆမှုနှင့်အတူရာသီ Rize အတွက်မကြာသေးမီကာလ၌ရှိရာအရပျကို ယူ. စိုးရိမ်ဖွယ်ရာသို့ရောက်ရှိနေသည်ကွှ rized ။ အထူးသဖြင့်ရာသီအဖွင့်နှင့်အတူ Rize လက်ဖက်ရည်ထဲမှာရာအရပျကို ယူ. ကေဘယ်လ်ကားမတော်တဆမှုအတွက်တိုးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမတော်တဆမှုအများအပြားသည်သေခြင်း၌လမ်းဆုံးသောအန္တရာယ်၏အရွယ်အစား၏အချက်အလက်များ [ပို ... ]
ရထားလမ်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် TCDD မီးရထားစည်းမျဉ်းမှ General Manager Erol Çıtakရထားလမ်းများတွင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူအခြေခံအဆောက်အဦများအောင်နှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ၎င်းတို့၏အဆောက်အဦစီးပွားရေးလုပ်ငန်း '' လိုင်စင်နှင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်လိုအပ်သည့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖွစျလိမျ့မညျ [ပို ... ]
တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း, အလီ Fuat Pasha - Dogancay Şenbayအကြားအခြေခံအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရ - မူလစာချုပ်ဖက်စပ်သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
TCDD တူရကီ - အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း, အလီ Fuat Pasha - Dogancay Şenbayအကြားအခြေခံအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရ - မူလစာချုပ်ဖက်စပ်သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်: တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အိမ်ခြံမြေအထွေထွေညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]